VVVVID 4.4.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား 50M - 250M
ဗားရွင္း 4.4.9 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ဗြီဒီယို ပေလယာမ်ား & အယ္ဒီတာမ်ား VVVVID
VVVVID ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဖျော်ဖြေရေး၏ 1570 ကျော်နာရီတစ်ရွေးချယ်ရေးဝင်ရောက်ဖို့ app ကို VVVVID Download: cores, ရုပ်ရှင်နဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွဲ - အားလုံးလုံးဝအခမဲ့နှင့်ဥပဒေရေးရာ။ သင်ပထမဦးဆုံးလက်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဘယ်တော့မှပုံပြင်များရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံခံစားရန်ကိုချစ်ကြိုက်နှစ်သက်သူကို 1.800.000 ကျော်မြတ်နိူးတဲ့အသိုင်းအဝုိင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
* ဒါကြောင့်သင်တို့ဆီသို့ဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ် ...
"ယောက်ျားများ, ယနေ့ညမာရသွန်။ ကျနော်တို့ကိုသင်သိကြအတူတူဒီစီးရီးကိုကြည့်ရမယ်ဒါဟာကိုခေါ်မယ့် ... ?"
ငါတို့ရှိသမျှသည်နောက်ဆုံးပေါ်စီးရီးကိုသိရှိသူတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖို့သူငယ်ချင်းနောက်ဆုံးပေါ်ဗိုင်းရပ်စ်ဗီဒီယိုများ, နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာရှိသည်။ VVVVID နှင့်အတူသင်သည်သင်၏တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်ခြင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးရှိသည်: သငျသညျနောက်ဆုံးတော့သူတို့ကိုတန်ဖိုးကိုအင်အားစိုက်ထုတ်ရှာတွေ့၏ပုံပြင်များပြောပြခြင်းနှင့်ရှယ်ယာနိုင်ပါတယ်။
* တွေ့ဆုံ VVVVID
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို Download: အယ်, ရုပျရှငျနဲ့တီဗီစီးရီးကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲနှင့် HD မှာရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာတစ်ပြိုင်နက် bingewatching စေရာတွေနဲ့မှပြီးသားပြည့်စုံအစုံအပြင်, တစ်ဦးချင်းစီအပတ်တွင်အမေရိကန်နှင့်ဂျပန်နှင့်အတူစီးရီးထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်။
VVVVID လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းတီဗီဖြစ်ပါသည်: သတင်းများ, ရယ်စရာဗီဒီယိုများ, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံရိပ်များနှင့်အတူအကြောင်းအရာအလိုက်လိုင်းများပေါ်တွင်နေ့တိုင်းလတ်ဆတ်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ခံစားရှာပါ။ သငျသညျအတှေးအချေါမပါဘဲအနားယူချင်လျှင်, စီးဆင်းမှုနှင့်အတူထွက်ခွာ: VVVVID သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုများကို select ပါလိမ့်မယ်, သင့်အရသာအရသိရသည်။
သင်သည်လက်ျာခံစားချက်အတွက်ခံစားရလျှင်သူကတခြားအသိုင်းအဝိုင်းနိူးနဲ့အဆက်အသွယ်သို့ကြွလာ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ VVVVID ၏, သင်တစ်ဦးတည်းဘယ်တော့မှမနေ, တစ်ဦး ciotolona ပေါက်ပေါက်နှင့်အတူဧည့်ခန်းထဲမှာဆိုဖာပေါ်အိပ်ခန်းထဲမှာသို့မဟုတ်သင့် plaid ၏ကုမ္ပဏီအတွက်ပါပဲ။ ဤတွင်ကိုဘယ်လိုဖွင့် ...
* 1.800.000 ပရိတ်သတ်တွေ
ရပ်ရွာများ၏ရောင်စုံ post ကိုကြားတွင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မဆုံးရှုံး: အကောင်းဆုံးအရာသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ခံစားမှုကြိုးစားခဲ့ကြမည်မျှထွက်ရှာရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကသိကြခင်မှာသင်တစ်ဦးစီးရီး၏နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲပေါ်တွင်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုထည့်သွင်းဖို့တိုက်တွန်းခံစားရပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးဇာတ်လမ်းတွဲ, ရုပ်ရှင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပြည့်စုံတစ်စုံသူတို့အထဲမှာသင်ကြကုန်အံ့သောစွမ်းအင်ထဲကပစ်။ သငျသညျစကားများ, ပုံများ, ဗီဒီယိုသို့မဟုတ် GIF ကို၌ကဖော်ပြလိုလျှင်သင်ရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။
အခါတိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးနှုန်းသည်သို့မဟုတ်သင့် post ကိုမှမှတ်ချက်ထားခဲ့ပါတစ်အကြောင်းကြားစာကိုသင်ချက်ချင်းစကားပြောဆိုမှုဆက်လက်နှင့်မိတ်ဆွေများအောင်ရာနှင့်သင်၏တူညီကိလေသာနှင့်အတူလူဖြည့်ဆည်းဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်!
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့တစ်အရသာရှိသည်နှင့်အကောင်းတစ်ဦးပုံပြင်အသိအမှတ်ပြုရန်သိလျှင်, ထိုအရပ်၌အမြဲလှုံ့ဆော်ဖို့နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာ VVVVID သောသင်အာမခံနိုင်ပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကနှင့် desktop ကိုဗားရှင်းအဘို့အကြှနျုပျတို့၏ website https://www.vvvvid.it သွားရောက်လည်ပတ်နှင့် Facebook နှင့် Twitter http://www.facebook.com/VVVVID @VVVVID အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ။
feedback@vvvvid.it: VVVVID မှာကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပြုချက်များ, မေးခွန်းတွေနဲ့မှတ်ချက်တွေကိုပို့, တိုးတက်စေရန်ဆက်လက်
VVVVID အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
VVVVID အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
VVVVID အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
VVVVID အား အခ်က္ျပပါ
sebastiano82 စတိုး 1.03k 211.26k
VVVVID ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ဗြီဒီယို ပေလယာမ်ား & အယ္ဒီတာမ်ား အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း VVVVID အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.4.9
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.vvvvid.it/Privacy.html
Release date: 2019-01-06 22:34:53
အနည်းဆုံး စခရင်: LARGE
လက်မှတ် SHA1: B6:B0:54:14:FA:E8:AA:9C:3C:CD:F7:94:37:84:17:61:88:A6:21:FB
ထုတ်လုပ်သူ (CN): MPerience
အဖွဲ့အစည်း (O): Mperience
နယ်မြေ (L): Rome
နိုင်ငံ (C): IT
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): RM
VVVVID APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ